Isan’ireo lalao goavana andrasan’ny rehetra amin’ny alahady ny fifanandrinana eo amin’ny Tam Anosibe sy ny FT Manjakaray, izay efa mifankafantatra hatramin’ny ela. Hatramin’izay dia nifandrimbiasana hatrany ny fandresena teo amin’ny roa tonta, saingy mbola misy vela hoesorina ny an’ny FTM.
Ho lalao goavana ihany koa ny fifandonan’ny kartie, TF Anatihazo Isotry izay hialoha ity « Donabe » ity. Ny sabotsy kosa dia hoentina mamarana ny tontolo andro ny fifandonan’ny US Ankadifotsy sy ny JC Antohomadinika. Eo ihany koa ny Cosfa sy ny US Ikopa ary ny Tfma sy ny Savonnerie.